भारतीय अपरेटर जियोले ८ हजार रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा फाइभजी स्मार्टफोन ल्याउने - Technology Khabar
» ताजा समाचार » भारतीय अपरेटर जियोले ८ हजार रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा फाइभजी स्मार्टफोन ल्याउने
भारतीय अपरेटर जियोले ८ हजार रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा फाइभजी स्मार्टफोन ल्याउने
Technology Khabar ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार
भारतीय मोबाइल अपरेटर रिलायन्स जियोले ४जी नेटवर्कको क्रान्तिपछि, फाइभजी स्मार्टफोन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। कम्पनीले ५जी स्मार्टफोन एकदमै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको छ।
विश्वास गरिन्छ कि यी स्मार्टफोनको मूल्य ५,००० भारु अर्थात ८ हजार नेपाली रुपैयाँ भन्दा कम हुनेछ।
यद्यपि कम्पनीको तर्फबाट यो भनिएको थियो कि कम्पनीले बजारको मागमा निर्भर यी स्मार्टफोनलाई २,००० देखि ३,००० भारुसम्ममा मूल्य तोक्न सक्दछ।
हाल भारतमा ५जी स्मार्टफोनको मूल्य २७,००० भारु बाट सुरू हुन्छ। तर जियोले सब भन्दा फास्ट नेटवर्क फोन एकदम कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ। भारतमा सस्तो ४जी स्मार्टफोन ल्याउने क्रेडिट पनि रिलायन्स जियोमा जान्छ। यी स्मार्टफोनको मूल्य १५०० भारु थियो।
रिलायन्स अधिकारीका अनुसार कम्पनीसँग २० करोड फोन उपभोक्ताको रहेका छन्। हाल यी प्रयोगकर्ताहरूसँग आधारभूत २ जी फोनहरू छन्। यस द्रुत गतिको जीवनमा ५जी स्मार्टफोनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले यसमा काम गरिरहेको छ । हाल भारतमा ५जी नेटवर्क पनि सुरु भएको छैन।
रिलायन्स समूहले फाइभजी स्मार्टफोन एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमको साथमा मिलेर बनाउने कुरा गरेको थियो। र यसका साथै रिलायन्सको सस्तो ५जी स्मार्टफोनका लागि अपरेटिंग प्रणाली बनाउनमा माइक्रोसफ्टको समेत मद्दत लिने बताईएको छ । एजेन्सी
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार
माइक्रोम्याक्सको इन्ट्रि लेभलमा नयाँ सिरिजका स्मार्टफोन
२४ मंसिर २०७३, शुक्रबार
सामसुंगको टाइजेन स्मार्टफोन जेड थ्री सार्वजनिक, अघिल्लो मोडल जेड वान भन्दा निकै ससक्त
२८ आश्विन २०७२, बिहीबार
असुसको जेनफोन सीरीजअन्तरगतको जेड००७ स्मार्टफोन आउँदै
११ पुष २०७१, शुक्रबार
मोबाइल फोन मेकर ट्रान्जिनले चीनमा आईपीओ निकाल्ने, कम्पनीका टेक्नो र आईटेल नेपालमा पनि उपलब्ध
माइक्रोसफ्टले ल्यायो निकै सस्तो फोन ‘नोकिया १०५’
२१ जेष्ठ २०७२, बिहीबार
यस्तो छ रूसी अन्तरिक्ष स्टेशनको सर्भिस मोड्युलमा आएको समस्याको कारण
डीपफेक के हो? यो कसरी मिथ्या समाचारभन्दा कैयाैं गुणा खतरनाक हुन्छ ?
भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना हुने
ग्यापुले सुरु गर्‍यो जि-क्यास, उपभोक्तालाई जि-क्यास कमाएर निःशुल्क सपिङको मौका
गाडीहरु अत्यधिक बिक्री भएपछि दोस्रो त्रैमासमा टेस्लाको नाफा चुलियो
मर्सिडिजले अब सबै कारलाई विद्युतीय बनाउने, विश्वभर ५ लाखभन्दा बढी चार्जिङ पोर्ट स्थापना गर्ने